Puntland oo Maxkamad gaar ah u samenaysa Argagaxisada iyo sababaha keenay • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Editorial / Puntland oo Maxkamad gaar ah u samenaysa Argagaxisada iyo sababaha keenay
Puntland oo Maxkamad gaar ah u samenaysa Argagaxisada iyo sababaha keenay
July 16, 2010 - By: Khalid Yusuf
Dowlada Puntland ayaa shaaca ka qaaday inay maxkamad gaar ah u sameyn doonto dadka lagu tuhmo falal danbiyeedyada lagu tilmaamoÂ Argagaxinta, QaraxyadaÂ iyo dilalka qorsheysan ee ka dhacay gobalada Puntland.
Go’aankan ayaa kasoo baxay kulamo maalmo ka socday magaalada Garowe ee caasimada Puntland, kulamadaasi ayey ka qeyb galayeen dhamaan Xukuumada oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Golaha Wasiirada.
Kulamadan ayaa si qoto dheer looga hadlay falalkii qorsheysnaa ee ka dhacay Puntland ee isugu jira dilalka, qaraxyada iyo waliba dadka ka danbeeya sidii tilaabo looga qaadi lahaa.
Kulamadan ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee looga hadlayey sidii la isu waafajin lahaa Sharciga Puntland ee hada jira ee ku dhisan Shariicada Islaamka, iyo sidii maxkamado gaar ah loogu sameyn lahaa dadka geysta falalka amniga lidka ku ah.
Wasaarada Amniga ee Puntland oo soo gudbisay qorshayaal kala duwan oo ku aadan sidii loo adkeyn lahaa Amniga Puntland, ayaa soo dhaweysay go’aankii ugu horeeyey ee isku raacaan Golaha Wasiirada oo ku aadan dadka geysta falal danbiyeedyada lagu tilmaamay argagaxisada.
Wasiirka Amniga ee Dowlada Puntland Gen.Yusuf Axmed Khayr oo Wareysi siiyey Horseed Media ayaa sheegay in sharcigan ku aadan Argagaxisada uu yahay kii ugu horeeyey oo si gaar ah wax looga qabanayo kooxaha iyo dadka soo abaabula ama fuliya weerarada argagaxisada iyo dilalka qorsheysan.
“…Argagaxiso waxaanu u naqaan cid walba oo qorsheysa inay dadka ku argagaxiso dilalka arxandarada ah, qaraxyada shacabka lagu dhextuuro, iyo qorshayaasha lagu doonayo in lagu burburiyo amniga dalka….” ayuu yiri Wasiirka oo ka hadlayey arrimaha maxkamada ay qaabilsan tahay.
Wasiirka oo ka hadlayey arrimahan ayaa sheegay in soo saarista sharciga ay salka ku heyso qaraxyadii iyo dilalkii dhawaanahan ka dhacay magaalada Bosaso ee lagu dilay saraakiil iyo madax ka tirsan dowlada Puntland iyo waliba dad rayid ah, asagoo sheegay in loo baahan in xukun culus lagu rido dadka falalkan geysta iyo waliba kuwa gacanta siiya.
Maxkamadan argagaxisada oo ayadu qeyb ka noqon doonta kuwa hada jira ee caadiga ah, ayaa la doonaya sida ay sheegeen xubnaha ka tirsan dowlada Puntland, inay dadjiso maxkamadeynta dadka argagaxisada lagu tuhmo.
Illaa iyo hada lama faah faahin sharciyada lala beegsan karo dadka ayagu gacanta siiya xubnaha lagu tuhmo inay yihiin argagaxiso, ayadoo dowlada Puntland horey digniino uga soo saartay in sharciga lasoo taagi doono cidii gacan siisa dadka geysta falal danbiyeedyada qorsheysan.
Gen.Yusuf Axmed Khayr, Wasiirka Amniga ee Puntland ayaa sheegay in hada la sugayo sharciyo kale oo cusub ooÂ ay dowladu ansixiso oo kuwaasi oo kuÂ aadan Burcadbadeeda iyo Tahriibta.
Xukun Dil ah
Dowlada Puntland ayaa sheegtay in qofkii lagu cadeeyo inuu qeyb ka ahaa falalka Argagaxisada uu xukunkiisu uu yahay dil, waxaa sidoo kale la sheegay in xukumo culus lala beegsan doono dadka ayagu soo dhaweeya ama gacan dhaqaale iyo taageero siiya kooxaha falalka argagaxisada geysta.
Fulinta Xukumadii hore loo riday
Kulankan Xukuumada Puntland ka yeelatay arrimaha amniga ayaa kusoo beegmaya xili ay jiraan dhaliilo ku aadan in xabsiyada ay weli ku jiraan dad lagu eedeeyey inay geysteen dilal qorsheysan iyo falal argagaxiso kuwaasi oo qaarkood lagu xukumay dil, ayaan weli lagu fulin xukunkooda.
In badan oo kamid ah ehelada dadka lagu dilay falalkii ka dhacay Bosaso, ayaa dhaliilay in aysan weli dowlada fulin xukumadii dilalka ahaa ooÂ ay horey u riday maxkamada darajada 1aad ee magaalada Bosaaso, maxkamadaasi oo ah midda inta badan lasoo taago dadka loo soo qabto falalka isugu jira dilka iyo weerarada qorsheysan.
Sirdoonka iyo Danbi baarista.
DadkaÂ falanqeeya arrimaha amniga ee Puntland ayaa intooda badan isku raacsan in tilaabooyinka ugu muhiimsan ee Dowlada Puntland looga baahan yahayÂ inay xoojiso ayaa dhanka,Â sirdoonka iyo xog aruurinta ku aadan dadka qorsheeya falalkan iyo waliba danbi baarista daba gasha shaqsiyaadka ka danbeeya weeraradii dhacay.
Dadka ku dhaqan Puntland ayaa ku kala aragti duwan Maxkamda u gaarka ah arrimaha Argagaxisada, ayadoo ay jiraanÂ dad sheegaya in ayÂ noqoneyso mid si gaar ah uga shaqeysa maxkamadeynta dadka arrimahaasi lagu tuhmo isla markaana ah tilaabo horey loo qaaday oo amniga lagu sugayo,Â halka ay jiraan dad shaki gelinaya inÂ go’aamada kasoo baxa maxkamadaasi ay ka duwanaan doonaanÂ kuwii horey uga soo bixi jiray maxkamadaha hada jira.